ASX २०० स्थगित रहन्छ ट्रेडिंग डेस्पसाइट COVID १ 200 पछि सुरु भयो - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B19B बजार समाचार
सम्पादकको पिक जनवरी 4, 2021 जनवरी 4, 2021 बेनेडिक्ट कासिगारा एशिया, अष्ट्रेलिया, सांप्रदायिक समाचार, सम्पादकको पिक, gigs, ग्लोबल विश्व, जापान, जापान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, जापान थोक र B2B, समाचार लेख, उत्तर अमेरिका
ठूला बैंकहरू बढेका छन्, तर ट्राभल स्टकहरू तल सारिएको छ।
नयाँ वर्षमा एसियाली सेयर राम्रो सुरु भयो, तर जापानको निक्की कोओआईभीआईडीको चिन्तामा गिरावट आएको छ।
बुधबार संयुक्त राज्यको जनमत संग्रहले कुन समूहले सीनेटमा प्रभुत्व जमाउनेछ।
अष्ट्रेलियाली शेयर ०
भिक्टोरियाले तीन रिपोर्ट गरेको छ कोलोनाभाइरसको अतिरिक्त घटनाहरू गत हप्तामा पहिलो अलार्महरू अपरेशनको पहिलो दिनमा माउन्ट गरिएको थियो। यो अनुमान गरिएको हो कि यात्रा र मनोरन्जनमा आधारित शेयरहरू तल झर्नेछन्। लि Administrative्क प्रशासक होल्डि्स यो भनिए पछि लगभग १ percent प्रतिशतले समाप्त भयो एसएस एन्ड सी टेक्नोलोजी होल्डिंगले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो.
शीर्ष तीन चालकहरू जिप को (+ 4.7%) हो, आईडीपी शिक्षा (+ 4.3%), र मेगा रिटेल कम्पनी (+%%)। चार प्रमुख बैंकहरु आफ्नो सिडनी प्रस्ताव मा १ र १.4प्रतिशत को बीच बढेको छ र अष्ट्रेलियाली डलर व्यावहारिक रुपमा 1 1.5.१77.15 अमेरिकी सेन्टमा स्थिर छ।
सफ्टवेयर र उपभोक्ता क्षेत्रहरूमा सक्रिय रहेका कम्पनीहरूले बियो नाउ, पे लिटर कम्पनी अफ्टरपे २ प्रतिशत बढेर। १२..2 डलर, र वूलवर्थ्स १.120.3 प्रतिशतले बढि ट्रेड गर्ने राम्रो रिपोर्ट गरे।
ब्लूमबर्ग गोल्ड सब इन्डेक्स २.2.6 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने स्पट गोल्ड २. rising प्रतिशतले वृद्धि भई प्रति औंस १ 2.4 1,921.90 २१.11 ० डलर कायम भएको छ। उप-सूचकांकमा प्रमुख लाभकर्ताहरू थिए, लगभग ११ प्रतिशत जति उत्तरी तारा संसाधन, ग्रेट वाल गोल्ड र इभोलुसन माइनिंग।
क्षेत्रीय घरको मूल्य बढ्न थाल्छ
CoreLogic बिक्री तथ्या indicate्क अस्ट्रेलिया मा घर मूल्यहरु डिसेम्बर २०१२ र २०२० मा क्रमशः १% र%% बृद्धि भएको संकेत गर्दछ।
डिसेम्बर २०१२ मा, अस्ट्रेलियाको राजधानी शहरहरूमा एक घरको औसत मूल्य $ 2012 696,413१। थियो जबकि एक औसत इकाईको मूल्य $ 574,388। थियो।
क्षेत्रीय मूल्य जून देखि सेप्टेम्बर मा लगभग%% को वृद्धि भयो।
सिडनी पूर्वी उपनगरहरु (-1pc) र NSW (-0.4pc) को सुदूर पश्चिम र ओराणा क्षेत्र घरका मूल्यहरु मा गिरावट रिपोर्ट गर्न अष्ट्रेलियामा मात्र दुई क्षेत्रहरु थिए। CoreLogic को डाटा मा आधारित, उच्च गुणवत्ता रियल ईस्टेट दर र सशक्त औद्योगिक उत्पादन कमजोरी को सट्टा आर्थिक शक्ति को सूचक प्रदर्शन गर्दै छन्।
घरको मूल्य क्षेत्र मा बढेको छ। गृह मान कथित गत महिनामा दुई ठाउँमा छोडियो। पछिल्लो बर्षदेखि, सबै बाहेकका सबै क्षेत्रहरूले घर मूल्य परिवर्तन रिपोर्ट गरेका छन्। अवस्थित आवश्यकताहरू पूरा गर्न आउटपुट पर्याप्त थिएन।
रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट अमेरिकी सेनेट चलाउने निर्णय
रिपब्लिकन पार्टी, जसलाई जीओपी पनि भनिन्छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई प्रमुख समकालीन राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये एक हो जससँग यसको मुख्य, ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्र्याटिक पार्टी पनि छ।
लगानीकर्ता घबराएर निगरानी गरिरहेका छन् मंगलवार जर्जियामा रन अफ पोल (स्थानीय समय) ले निर्णय गर्नेछ कि एक पार्टी वा अर्कोले सिनेटमा हावी हुने छ। रिपब्लिकनहरु का सीनेट को सन्तुलन पकड छ भने, तिनीहरू संघीय कानून मा एक प्रमुख कारक हुन सक्षम हुनेछ। यदि डेमोक्र्याटले सबै चुनावहरू जित्यो भने, उपराष्ट्रपतिले सिनेट अध्यक्षको रूपमा निर्धारण गर्ने मत हुनेछन्।
अमेरिकी पूंजी कोष को योजना को कार्यान्वयन को लागी बिल छिटो पारित गर्न को बाधा बढ्नेछ। कुनै पनि विश्लेषक भन्छन कि फेडले क्वान्टिटेटिभ ईजि .को अर्को कार्यक्रमको साथ बर्षको अन्त्यमा दर बढाउनेछ। कारखानाहरू कसरी फैलिरहेको कोरोनाभाइरस र अमेरिकी कारखाना र सेवाहरूको ISM सर्वेक्षणको साथ व्यवहार गर्दैछ भनेर हेर्न विभिन्न उत्पादन सर्वेक्षणको योजना बनाईएको छ।
नयाँ वर्षको बजारमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप पछि वृद्ध व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार आएको रिपोर्टले कडा प्रतिक्रिया देखायो। जापान बाहिरको मुख्य इक्विटी इन्डेक्स, एमएससीआई ०.१ प्रतिशतले नयाँ रेकर्ड उच्चमा पुगेको छ।
सोमबार जापानी सेयरले प्रधानमन्त्री योशीहाइड सुगाको घोषणाको प्रतिक्रियामा गिरावट आएको छ कि उसले "कोरोनाभाइरस" को प्रसार र हवाबाट यसको सम्भावित प्रसार रोक्न अभूतपूर्व कदम चाल्न सक्छ।
यात्रा अवरोध र ओभरटाइम कटौतीको परिणामको बारेमा चिन्ताहरू एयरलाइन, शिपिंग, र रिटेलर सेयरहरू कम धकेलिरहेका छन्।
तेलको मूल्य केही महिनाको लागि $$ डलरमा बढेको देखि स्थिर छ, र अब $२ डलर प्रति ब्यारल मा स्थिरता पाइरहेका छन्। त्यस दिनको लागि थोरै ब्रन्ट बढ्यो, ठूलो ब्रन्ट खसेको थियो। सोमबार, तेल फ्यूचर आठ सेन्ट गिरावट भएर .१... डलरमा पुगेको छ, जबकि अमेरिकी क्रूड १२ सेन्ट तल झरेर $$.54 डलरमा झरेको छ।
अस्ट्रेलियाको सेयर शक्ति को bslance सांप्रदायिक समाचार कोभिड 19 अमेरिकी सीनेट